Wararka - Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato Kala saarida Cuf-jiidadka
Dhammaanteen waan ognahay in mar kasta oo miisaankiisu sarreeyo, uu bato heerka biqilka, firfircoonida iyo dhalidda. Sidaa darteed, kala-soocida cuf-jiidadka ayaa door muuqda ka ciyaara qiimaynta miraha miisaan ahaan warshadaha warshadaynta abuur. Haddaba intee in le'eg ayaad ka taqaannaa kala-saareyaasha cufjiidadka?
Waa maxay Kala-duwayaasha Cufis-jiidadka?
Kala-saareyaasha cuf-jiidadka waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro badeecadaha isku cabbirka leh laakiin cuf-jiidad gaar ah oo kala duwan. Waxay si wax ku ool ah uga saari karaan qayb ahaan la cunay, aan qaan-gaarin, cudurka cayayaanka iyo miraha caaryada leh ee abuurka si loo hubiyo tayada ugu sareysa ee badeecada ugu dambeysa. Hababka nadiifinta dhaqameed ee nadiifiyeyaasha abuurka iyo durbaannada saafiga ah waxay caddeeyeen inay waxtar yar yihiin. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu kala saaro oo lagu habeeyo kafeega, lawska, galleyda, digirta, bariiska, sarreenka, sisinta iyo miraha kale.
Waa maxay Mabaadi'da Shaqaynta ee Kala-saariyaha Cufisjiida?
Kala soocida cufisjiidadu waa hab warshadeed oo lagu kala saaro laba qaybood, ha ahaato hakin, ama isku darka qallalan ee qalalan halkaas oo lagu kala saaro qaybaha iyo cufisjiidadka.
Qaybaha isku dhafka ah waxay leeyihiin miisaan gaar ah oo kala duwan. Dhammaan hababka cufisjiidadka waa caadi marka la eego in dhammaan ay isticmaalaan cufisjiidadka xoogga ugu sarreeya.
Mid ka mid ah noocyada kala soocida cuf-jiidadka ayaa alaabta ku qaadaya faaruq ku dul daboolan muraayad gariiraysa. Tani waxay keenaysaa in walxaha hawada lagu hakiyo iyada oo wasakhda culculus ay kaga haraan shaashadda oo laga soo saaro dhagxaanta. Alaabtu waxay ku dul qulqulaysaa miiska gariirka halkaasoo hawada cadaadisku ku qasban yahay inay dhex maraan, taasoo keenaysa in walaxda la dahaadho iyadoo loo eegayo cuf-jiidkeeda gaarka ah. Qaybaha culculus waxay u guuraan lakab sare, halka qaybaha khafiifka ah ay u guuraan lakabka hoose ee miiska.
Si loo helo kala-soocidda cuf-jiidad gaar ah oo wax ku ool ah, sahayda hawada la cadaadiyay waxay u baahan tahay in si sax ah loo hagaajiyo. Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo la isticmaalayo marawaxadaha si gaar ah loo hagaajin karo si loo xakameeyo qaybinta hawada meelaha kala duwan ee sagxada gariirta.
Noocan ah kala-soocida cuf-jiidadka waxa uu leeyahay sagxad leydi ah si ay alaabtu u socoto masaafo dheer taasoo keentay in la nadiifiyo qaybaha iftiinka iyo kuwa culus.
5XZ-10 Kala soocida Cuf-jiidadka oo leh Nooca Afuufidda Hawada
Warshadaha Codsiga ee Kala-duwayaasha Cuf-jiidadka
Kala soocida cuf-jiidadka waxaa loo adeegsadaa warshado kala duwan oo kala duwan, goobta ugu ballaaran uguna weyn waa beeraha.
Kala-soocida cuf-jiidadka waxaa loo isticmaalaa ka-saarista wasakhda, isku-darka, waxyeelada cayayaanka iyo unugyadu aan qaan-gaarin ee tusaalooyinka soo socda: sarreen, shaciir, kufsiga saliidda, digirta, digirta, digirta kookaha, linseed. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu kala saaro oo lagu habeeyo digirta qaxwaha, digirta kookaha, lawska, galleyda, digirta, bariiska, qamadiga, sisinta iyo cuntooyinka kale ee cuntada.
Astaamaha Kala-duwayaasha Cufis-jiidadka
Si fudud u kala sooci kara walxaha granular iyadoo loo eegayo miisaanka alaabta.
Sagxadda sagxadda sagxada fudud ee nadiifinta.
Hagaajinta fudud ee u janjeersiga sagxadda jihooyinka dhaadheer iyo kuwa leexleexdaba.
Nidaamka taageere badan oo loogu talagalay xakamaynta saxda ah ee hawada.
Xakamaynta saxda ah ee hawada, heerka quudinta iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqa sagxada.
Faa'iidooyinka Kala-duwayaasha Cufis-isjiidadka
*Shaqada dadka oo la dhimo
* Waxtarka sare ee kala soocida
* Awood u leh inuu si wax ku ool ah u doorto oo uu u kala saaro
* Kala soocida wasakhaha waxay wanaajisaa tayada alaabta
*Yaree khataraha caafimaadka macaamiisha
SYNMEC waxay leedahay noocyo kala duwan oo kala soocida cuf-jiidadka tayada sare leh ee iibka ah, iyo haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato alaabtayada, fadlan nala soo xiriir!
Waqtiga boostada: Sebtembar-01-2021